Madaxweynaha Galmudug oo rabo xilka ra’iisul wasaaraha loo magacaabo shaqsi ka soo jeedo beelaha Galmudug | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Madaxweynaha Galmudug oo rabo xilka ra’iisul wasaaraha loo magacaabo shaqsi ka soo...
Xorriya Online: Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, Qoorqoor ayaa Muqdisho ka wada dadaal iyo olole siyaasadeed ee ku aadan xilka ra’iisul wasaaraha, iyadoo uu dadaal ugu jiro sidii xilkaas loogu magacaabi lahaa shaqsi ka soo jeeda beelaha Galmudug dego.
Tan iyo markii Sabtidii la soo dhaafay oo ay taariikhda aheyd 25-kii July oo ay baarlamaanka kalsoonida kala laabteen ra’iisul wasaare Kheyre ayaa waxaa bilowday xusul duub loogu jiray xilka ra’iisul wasaaraha oo ah mid la filaayo in loo magacaabo shaqsi ka soo jeedo beelaha Hawiye marka la eego qaabka awood qeysiga ee afar iyo bar, 4.5.
Madaxweynaha Galmudug ayaa si degdeg ah u yimid Muqdisho, maalin kaddib xil ka qaadistii ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, waxaana uu bilaabay kulamo uu la qaadanayo madaxda dowladda, sida madaxweyne Farmaajo, Fahad Yasiin, siyaasiyiin, xildhibaano, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo odayaal dhaqameed.
Madaxweynaha Galmudug ayaa kula kulmay madaxweyne Cabdullahi Maxamed Farmaajo madaxtooyda dalka ee Villa Somalia halkaas uu kaga codsaday in xilka ra’iisul wasaaraha loo magacaabo qof ka soo jeedo beesha Habargidir. Waxaana la filayaa in sidoo kale uu kulamo kale la yeesho saacadaha iyo maalmaha soo socda si uu ugu qanciyo madaxweyne Farmaajo in uu xilka ra’iisul wasaaaraha u magacaabo shaqso ka soo jeedo beeshaas.
Sidoo kale, madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor iyo Agaasimaha Guud ee Hay’adda Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA, Fahad Yaasiin ayaa xalay ku kulmay Xarunta Nabadsugida Qaranka. Waxaa kulanka ku wehliyey Kamaal Guutaale, Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan iyo xubno kale oo ay isku beel yihiin.
Fahad Yaasiin ayaa ah saaxiib ugu dhaw madaxweyne Farmaajo, waxaana dadka ay sheegaan in uu madaxweyne Farmaajo kala tashado markuu qaadanayo go’aamada waaweyn ee saameynta leh.
Ilo xog ogaal ah ayaa noo xaqiijiyey in labadaan mas’uul ay ka wada hadleen xaalka uu dalka marayo sida, doorashooyinka iyo amniga, balse arrinta ugu muhiimsaneed iyo sababta kulanka ayaa aheyd in madaxweynaha Galmudug uu Fahad Yaasiin kala kaashada in madaxweyne Faramaajo uu xilka ra’iisul wasaaraha u magacaabo shaqsi ka soo jeedo beesha Habargidir.
Guud ahaan marka kala soo tagao beelaha reer Galmudug waxuu si gaar ah u doonayaa in xilka ra’iisul wasaare loogu magacaabo beeshiiha Habargidir. Ma caddo in madaxweynaha Galmudug uu xilka ra’iisul wasaare uu rabo shaqsi gooni ah iyo in uu rabo kaliya in loo magacaabo qof ka soo jeedo beesha Habargidir kaliya.
Madaxweynaha Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo kulmay ayaa waxey sidoo kale wada hadleen isla arrintaa. Madaxweynaha ayaa gudoomiyaha ka codsaday in uu taageero ku siiyo olalaha iyo dagaalka uu wado.
Dhan kale, odayaal iyo siyaasiyiin ka soo jeedo beesha Habargidir ayaa Madaxtooyada kula kulmay madaxweyne Farmaajo kuwaas oo madaxweynaha kala hadlay, kana codsaday in shaqsi ka soo jeedo beeshooda loo magacaabo xilka ra’iisul wasaaraha.
lama saadaalin karo in madaxweyne Farmaajo aqbali doono codsiga iyo dadaalka ay wadaan siyaasiyiinta iyo odayaasha beesha Habargidir oo uu ugu horreeyo madaxweynaha Galmudug.
Sanadkii 2017 ayey aheyd markii sidaan oo kale siyaasiyiin iyo odayaal ka soo jeedo beesha Habargidir ay dadaal xoogan iyo olale u galeen sidii madaxweyne Farmaajo xilka ra’iisul wasaaraha ugu magacaabi lahaa qof ka soo jeedo beeshooda, laakiin madaxweyne Farmaajo ma aqbalin codsikoodii.